Ra’iisul Wasaaraha oo sheegay in dhowaan Guddi Wasiiro loo diri doono Kismaayo | Awdalnation.com
Ra’iisul Wasaaraha oo sheegay in dhowaan Guddi Wasiiro loo diri doono Kismaayo
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa sheegay in dhowaan Guddi Wasiiro loo diri doono magaalada Kismaayo, si xal waara looga gaaro cabashada ka taagan dhismaha Baarlamaanka Jubbaland kaasoo horay uga hor-yimaadeen Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in arrintan ay sida ugu dhaqsiyaha badan u geli doonaan Guddiga Wasiirada ee la magacaabay, isla markaana daraasad ku sameyn doonaan sida cabashada tahay, isla markaana la fariisan doonaan Maamulka Jubbaland, qeybaha bulshada iyo dadka cabashada ka keenay Baarlamaanka Jubba.
“Howhsaas waa la geli doonaa, Guddiga Wasiirada ee la magacaabay ayaa ka howl geli doona, waxaa ay daraasad ku sameyn doonaan cabashada jirta, way la fariisanayaan Maamulka Jubba, qeybaha bulshada iyo dadka cabashada, arrintaas xal ayaa laga gaari doonaa”ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in war murtiyeedkii ka soo baxay Beesha Caalamka lagu taageeray howsha Guddiga Wasiirada ay qaban doonaan, si arrintan xal waara looga gaaro buuqa iyo qeylada taagan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa dhowaan markii uu tagay Kismaayo isla gartay isaga iyo Madaxweynaha Jubba in arrinta cabashada Guddi loo saaro, iyadoo intii aan la gaarin taas uu Baarlamaanka Federaalka ansixiyay mooshinkii laga keenay dhismaha Baarlamaanka Jubbaland oo sharci darro lagu tilmaamay.
Guddigan uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa ay ka kooban yihiin Wasiiro, waxaana Guddoomiye u ah wasiirka Arrimaha Gudaha, waxaana la ogeyn sida Maamulka Jubba uu aqbali doono inuu Guddigan la fariisto, maadaama ay sheegeen in aysan wax cilaaqaad ah la yeelan doonin dowladda Federaalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee Maamulka Jubba ayaa ku dhawaaqay inuu xiriirka u jaray dowladda Federaalka, iyadoo banaan baxyo looga soo horjeeday Baarlamaanka Federaalka uu ka dhacay Kismaayo iyo deegaanada kale ee ka tirsan Jubooyinka.